Ny fomba fanovan'ny Symbiose an'ny marketing nentim-paharazana sy nomerika amin'ny fomba fividianantsika zavatra | Martech Zone
Ny indostrian'ny marketing dia mifamatotra lalina amin'ny fitondran-tenan'ny olombelona, ​​ny fanaony ary ny fifandraisany izay manondro ny fanovana ny dizitaly nandritra ny dimy amby roapolo taona lasa. Mba hitazomana antsika handray anjara dia namaly an'ity fanovana ity ny fikambanana tamin'ny fanaovana ny paikadim-pifandraisana nomerika sy media sosialy ho singa iray lehibe amin'ny drafitry ny varotra ataon'izy ireo, nefa toa tsy nilaozana ireo fantsom-paharazana.
Fampitaovana nentim-paharazana nentim-paharazana toy ny takelaby, gazety, magazine, fahitalavitra, radio, na flyer eo akaikiny Hafanàm-po an-barotra ary ny fampielezan-kevitra amin'ny haino aman-jery sosialy miara-miasa dia mandray anjara amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika, ny dikany, ny tsy fivadihana ary amin'ny farany hitaomana ny mpanjifa amin'ny dingana rehetra amin'ny fizotran'ny fanapaha-kevitr'izy ireo.
Ahoana no fanovana ny fomba fividianantsika zavatra? Andao hodinihintsika izao.
Androany, ampahany lehibe amin'ny fiainantsika no mitranga eo amin'ny sehatra nomerika. Mazava ny isa:
Tamin'ny andro farany tamin'ny 2020 dia nisy 4.9 miliara mpampiasa Internet ary kaonty mavitrika 4.2 miliara amin'ny tambajotra sosialy manerantany.
Rehefa nivelatra ny tsena an-tserasera dia nitombo koa ny paikadin'ny varotra orinasa. Ny revolisiona dizitaly dia nahafahana niditra an-tsehatra haingana kokoa sy mivantana amin'ireo mpanjifa, ary koa ny mpampitohy mampitaha ny vokatra sy ny vidiny, mitady ny tolo-kevitra, manaraka ny mpanohana hevitra ary mividy entana.
Ny fomba fividianantsika dia miampanga ny normalisation of internet use and the kind of hands-hands, toy ny fifandraisana amin'ny varotra sosialy, ny fandraisana fanapahan-kevitra ary ny fiantsenana dia mora kokoa noho ny teo aloha.
Tsena vaovao, Marketing vaovao?
Eny, fa aleo hazava.
Paikady ara-barotra mahomby, nentim-paharazana sy niomerika, manome soso-kevitra ny hamaritana ny filan'ny vondrom-piarahamonina, mamorona tolotra manokana handraisana ireo filàna ireo ary hifampiresaka tsara amin'ireo mpikambana ao aminy mba hampitomboana ny fahafaham-po. Na dia tsy azo lavina aza ny fisian'ireo vondrom-piarahamonina an-tserasera, ny nomerika dia tsy ny marketing rehetra.
Raha tsy mino ahy ianao dia raiso Tetikasa Pepsi Refresh ohatra. Tamin'ny 2010, Pepsi-Cola dia nanapa-kevitra ny hiala amin'ny dokam-barotra mahazatra (izany hoe doka fahitalavitra isan-taona an'ny Super Bowl) hanangana fampielezana dizitaly goavambe, manandrana manangana fahatsiarovan-tena ary hikolokolo fifandraisana lava be amin'ireo mpanjifa. Nanambara i Pepsi fa hanome vola 20 tapitrisa $ ho an'ireo fikambanana sy olona manana hevitra hahatonga izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa, hisafidy ny tsara indrindra amin'ny fifidianana ampahibemaso.
Mikasika ny fifamofoana dia nahagaga ny fikasan'izy ireo! Vato mihoatra ny 80 tapitrisa no voasoratra anarana, Pejy Facebook an'i Pepsi nahazo efa ho 3.5 tapitrisa tiany, ary Kaonty Twitter an'i Pepsi niarahaba ny mpanaraka maherin'ny 60,000, fa azonao atao ve ny maminavina ny nanjo ny varotra?
Ny marika dia namoy vola sahabo ho antsasa-tapitrisa tapitrisa dolara, nilatsaka tamin'ny toerany nentim-paharazana noho ny zava-pisotro malefaka laharana roa tany Amerika ka lasa ny laharana fahatelo, ao aorian'ny Diet Coke.
Amin'ity tranga manokana ity, ny media sosialy irery no nahafahan'i Pepsi nifandray tamin'ny mpanjifa, nanatsara ny fahatsiarovan-tena, mitaona ny fihetsiky ny mpanjifa, nahazo valiny, kanefa tsy nampitombo ny varotra izay nanery ny orinasa handray, indray mandeha, paikady marobe ahitana fomban-drazana tetika marketing. Fa maninona no hisy izany?
Tanana nomerika sy nentim-paharazana
Tsy tapaka ny haino aman-jery nentim-paharazana. Ny tokony hamboarina dia ny fiovan'ny toe-tsaina ny amin'ny tokony hampiasan'ny haino aman-jery nentim-paharazana ny anjara asany ankehitriny.
Charlie DeNatale, ilay tetikady momba ny haino aman-jery nentim-paharazana ambonin'ilay vala
Heveriko fa tsy marina izany, raha tsy izany, maninona isika no mbola hahita an'i McDonald's ety ivelany?
Na dia antsointsika hoe nentim-paharazana aza dia nivoatra be ny varotra mahazatra hatramin'ny vanim-potoanan'ny radio sy ny gazety, ary mandray andraikitra lehibe tokoa izy izao. Manampy amin'ny fikendrena ireo mpikambana isan-karazany ao amin'ny fianakaviana iray izy, hahatratra ireo mpihaino manokana amin'ny alàlan'ny gazety manokana, fandaharana amin'ny fahitalavitra, ary gazety, manampy amin'ny famoronana fahatsapana fahamendrehana, fahatokisana ary fahazarana amin'ny marika, ary amin'ny fananganana rivo-piainana mety manodidina azy toy ny tsara.
Satria ny nomerika dia manaporofo fa tena ilaina amin'ny marika mba haharaka ny tsena miovaova hatrany, ny nentin-drazana dia mety ho fitaovam-piadiana hiadiana amin'ny faharetan'ny olona hatrany, hahatonga ny fomba manokana kokoa, satria ohatra ny katalaogam-bolana. Na dia mety mila influencer aza ny sasany hamaritana ny fividianany, ny sasany kosa mety hanome fahatokisana bebe kokoa amin'ny lahatsoratra an-gazety.
Rehefa miasa mifanindran-dàlana, ireo mpampita haino aman-jery nomerika sy nentim-paharazana dia mivondrona eo amin'ny lafiny roa amin'ny mpanjifa, hahatratra ny mpanjifa mety ho tonga amin'ny fifanakalozana tsy miankina sy mahaleo tena amin'ny fampitomboana ny vola miditra. Ny fitrandrahana ny iray sy ny iray hafa dia mampitombo ny vintana hitazomana ny mpijery ao anaty "feon'ny hery mitaona" an'ny marika ary hisy vokany tsara amin'ny dian'ny fanapahan-kevitry ny mpanjifa.
Ny fisian'ny nomerika sy ara-tsosialy miaraka amin'ireo fitaovana finday dia mamolavola ny fomba fividianantsika, manosika ny zanak'olombelona mankany amin'ny fiantsenana an-tserasera, saingy ny valin'io fanovana io dia ny paikadim-barotra maro-fantsona, ao anatin'izany ireo fitaovana nentin-drazana izay mitaona ny fizotran'ny fahazoana rehetra. Mifampiresaka amin'ny alàlan'ny fantsona samihafa, manome toky fa sarotra kokoa ny mandositra ireo orinasa bontolo ny fitaomana izay mety hiteraka fiatraikany amin'ny dingana rehetra amin'ny dia ataon'ny mpanjifa manomboka amin'ny fanairana ny faniriana hatramin'ny fividianana aorian'ny fividianana.
Tags: ambonin'ilay valaCharlie denataleHafanàm-po an-barotraPepsitetikasa famelomana pepsiSocial Media Marketingvarotra nentim-paharazana